नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि - Onlinekhabarhub.com
बुधबार १ मंसीर २०७८ १९:५२:१६ बजे
काठमाडौँ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार पनि दोहोरो अङ्कले बढेको छ । लगातार उकालो लागेको नेप्से परिसूचक बुधबारको वृद्धिसँगै पुनः दुई हजार ८०० को बिन्दुमा पुगेको छ ।
नेप्सेका अनुसार पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले वृद्धि भयो । मानुषी लघुवित्त, तेह्रथुम पावर कम्पनी ९.९९ र नेपाल बङ्गलादेश बैंकका शेयरधनीले ९.९८ प्रतिशतले कमाए । त्यस्तै, बोटलर्स नेपाल तराई ७.४७, महालक्ष्मी विकास बैंक ७.४१, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स ४.१३, गुह्वेश्वरी मर्चेन्ट बैंकले ३.८८ र एनआरएन इन्फास्टकचरका लगानीकर्ताले ३.०९ प्रतिशतले गुमाए ।
प्रकाशित मिति: बुधबार १ मंसीर २०७८ १९:५२:१६ बजे
सुनचाँदी मूल्यमा भारी गिरावट
काठमाडौं । नेपाली बजारमा यस साता सुनको भाउमा निरन्तरको
एनप्लस प्रोफेसनको ६ वटा नयाँ उत्पादन सार्वजनिक
काठमाडौं । एनप्सल प्रोफेसनले ६ वटा नयाँ उत्पादन सार्वजनिक
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबारका लागि विदेशी
काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय
काठमाडौँ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज
आजको लागि विदेशीको मुद्राको विनिमय दर
काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको
राज्यका अंगमा विदेशीले हात हाल्न खोजे : माधव नेपाल
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले
कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले पाए विश्वासको मत
काठमाडौं । कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विश्वासको मत पाएका
सीपी मैनालीमाथि प्रचण्डको प्रहार
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा(माले)का महासचिव
काँग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा युवानेता प्रकाश रसाइलीको उम्मेदवारी
काठमाडौं । काँग्रेसका युवा नेता तथा सांसद प्रकाश रसाइली
‘लाजको पसारो’ : सर्वोच्चकै चिया चिनी खाएर उसैको बेइज्जत गरे वकिल–न्यायाधीशले
काठमाडौं । सर्वोच्चमा बहस पैरवी गर्दै आइरहेका एक जना
१०१ बर्षीय महिलाले जन्माईन् बच्चा
एजेन्सी । सामान्यतया महिलाको गर्भाधारण अवधि ४९ वर्षसम्म मानिएको
जव युवतीले १८ वर्षपछि २ वटा योनी र २ वटा पाठेघर भएको थाहा पाइन्
एजेन्सी । हामीले सुन्दै आएको कुरा महिलाहरुको १ वटा
शवगृहको फ्रिजरमा राखिएको शव सात घण्टापछि जीवित भएपछि.....
एजेन्सी । कहिलेकाहीँ मानव शरीरसँग सम्बन्धित यस्ता घटना पनि
गाेकर्णेश्वर मिडिया हाउस प्रा. लि. द्वारा सञ्चालित
सूचना विभाग दर्ता नं. २३४३/०७७-७८
व्यवस्थापक : हिरा लाल तामाङ्ग (हिरा लामा)
सम्पादक : चन्द्र धामी
विज्ञापनकाे लागी : 9802316840
चाबहिल, काठमाडाैँ ।
फाेन नं‍ : 9851002112 / 01-4493611
ईमेल : info@onlinekhabarhub.com
Copyright © 2021 www.onlinekhabarhub.com | All Rights Reserved.
Developed By akasherma